Google dia hamaha ny olana rehetra amin'ny Pixel 2 ary hanitatra ny fiantohana | Androidsis
Google Pixel 2 mety ho ilay terminal Android tonga lafatra io Raha tsy nitondra olana be dia be izy hatramin'ny andro voalohany nandefasana azy ary raha tsy mbola nihetsika i Google mba hamahana izany.
Ny goavana Mountain View dia natomboka tamin'ity volana ity finday avo lenta avo roa heny nahafeno ny ankamaroan'ny vinavinam-bola tamin'ny volana vitsivitsy lasa izay. Ireo ny Google Pixel 2 sy Pixel 2 XL. Azo vinavinaina fa nankasitrahan'ny mpanao gazety rehetra ny telefaona ary nahazo betsaka hevitra tsara.
Ny sasany somary somary kely diso fanantenana tamin'ny fanapahan-kevitr'i Google hamerina ny loko voajanahary amin'ny fisehoana AMOLED. Fanapahan-kevitra mahaliana momba ny varotra, rehefa dinihina fa nandritra ny taona 2017 dia natomboka tamin'ny telefaona finday avo lenta ny lokon'ny finday avo lenta.
Na eo aza izany, misy ny mpampiasa mitsikera an'i Google noho izany tsy fahampian'ny "saturation" amin'ny lokon'ny pikantsary Pixel 2, olana iray izay azo vahana amin'ny alàlan'ny fanavaozana ny firmware fotsiny.
Na izany aza, ny olana lehibe indrindra dia hita tao amin'ny forum ofisialin'ny orinasa, izay nitarainan'ny mpampiasa maro ny fisehoan-javatra iray Burn-in na matoatoa ao amin'ny efijery Pixel 2 XL. Ity olana ity dia miseho amin'ny alàlan'ny fametahana maharitra ny singa interface isan-karazany eo amin'ny efijery. Nitaraina ihany koa ireo mpampiasa hafa momba ny tabataba hafahafa avy amin'ny mpandahateny.
Ankehitriny, nanambara i Google fa hiezaka ny hamaha ny olana rehetra amin'ny telefaona finday vaovao, na amin'ny alàlan'ny fanavaozana ny lozisialy na fanelanelanana amin'ny alàlan'ny fitaovana.
Fa ny tena zava-dehibe dia izany hampitomboin'ny orinasa amin'ny fomba ofisialy ny fiantohana 1 taona mandehandeha amin'ny finday ho 2 taona.
Mikasika ny olana may dia toa izany ny fanavaozana dia hampihena kely ny famirapiratan'ny efijery farany ambony ary hahafahana manafina ireo bokotra fitetezana izany dia ao amin'ny faritra ambany.
Tsy natao ho an'ny tsy misy izy io, fa ireo bokotra ireo izay tsy dia manjavona loatra amin'ny efijery dia tonga hatrany amin'ny endrika aloka ho an'ny mpampiasa sasany ny Pixel 2. Farany, ny tabataba avy amin'ny mpandahateny hamboarin'ny orinasa miaraka amin'ny fanavaozana amin'ny ho avy io. Mandra-pahatongan'izany, ny vahaolana dia ny fanakanana ny fifandraisana NFC.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Hamboarin'i Google ny olana rehetra Pixel 2 sy hanome valisoa ireo mpampiasa
Voamarina ny famolavolana OnePlus 5T